“၁၀” တန်း မအောင် ခဲ့ တဲ့ ညီလေး ညီမလေး များ ( ဒီပို့စ် ကို မြင်ရင် ကျော် မသွား ပါ နဲ့ ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်ပေးပါ) – Let Pan Daily
Let Pan | August 11, 2020 | Knowledge | No Comments
လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်ေ လာက် က အိန္ဒိယနိုင်ငံ သား တစ်ယောက် နဲ့ အလုပ် ကိစ္စစကားပြောဖြစ်ခဲ့ ပါတယ်။သူက IT company လေးတစ်ခုပိုင်တယ်။ ဟိုဟိုဒီဒီအကြောင်းတွေပြောရင်းနဲ့ ဘဝမှာကျရှုံးမှုတွေ အကြောင်းရောက် သွားတယ်။ ကျနော့်အနေနဲ့ ဘဝမှာအောင်မြင်နေတဲ့လူတွေအကြောင်း ကြားရတာအပ်ကြောင်းထပ်နေပြီမို့ စိတ်မဝင်စားပါ ။အကြိမ်ကြိမ်မေ အာင်မြင်ပြီး မှ အောင်မြင်လာ တဲ့ အက်ဒီစင်ဘာညာ ဆိုတာလည်း ငယ်ငယ် ကတည်းက ကြားရတာရိုးနေပြီမို့ ကျနော့်အတွက် မတိုးတော့တဲ့ မိုတီဗေးရှင်းဆေးဖြစ်နေပါပြီ။ ကိုယ်လက်လှမ်းမမီနိုင်တဲ့ KFC သူဌေးတို့ဘာညာထက်စာရင် ကျရှုံးမှုကနေ ကိုယ်လက်လှမ်းမီနိုင်လောက်တဲ့ အောင်မြင်မှုတစ်ခု ကို လက်တွေ့ တည်ဆောက်ခဲ့သူတွေ ကိုပဲ စိတ်ဝင်စား ပါတယ်။
ကျနော် နဲ့တွေတဲ့ Kumar က သူ့ဘဝ မှာ ၁၀ တန်းကျတုန်းက စိတ်ဓာတ် အတော်ကျဖူးကြောင်းပြောတော့ မေးမိတယ် ။ အာ့နဲ့ နောက်နှစ်ပြန်ဖြေတာ အောင်သွားရောလား ဆိုတော့ မအောင်သေးဘူးတဲ့ ။ မင်းဒါဆိုရင် IT ပညာရှင် ဘယ်လိုဖြစ်လာသလဲ? လို့မေးတော့…. ၁၀ တန်း မအောင်တာ နဲ့ဘဝကြီးကတန့်နေရမှာ လားတဲ့။ကျနော့်ကို ပြန်မေး တယ်။ မင်း အိန္ဒိယက လုပ်ငန်းရှ င် သူဌေးကြီး Subhash Chandra ကို သိလားတဲ့။ Zee Television ကစလို့ မီဒီယာ၊ နည်းပညာ၊ ပညာရေး၊ ဆန်ကစလို့ စားသောက် ကုန်လုပ်ငန်း အင်ပါယာကြီး ထူထောင်ထား တဲ့ သူဌေးကြီး၊ လွတ်တော် အမတ် Subhash Chandra ကို သိတာပေါ့လို့။ သူ့အကြောင်း စာ အုပ် ရှိတယ်။“my journey as the wrong man at the right time” တဲ့။ ဘဝမှာ အချိန်ကိုက်မှာ အမှားသွားလုပ်မိရင်း အမှန်ဖြစ်သွားသူတွေမနည်းဘူး။ ဒါ့ကြောင့် အမှားလုပ်မိတိုင်း စိတ်ညစ်စရာမဟုတ်ဘူး။ ပြန်ပြင်လို့ရတဲ့ အမှားမှန်သမျှက အမှားလို့မခေါ်ဘူးဗျ။ အေး… နောက်မမှားစေနဲ့။ သင်ခန်းစာမယူတတ်ရင် အိုပြီးသေသွားတဲ့အထိ အမှား ကို ဆင့်ကာဆင့်ကာ ထပ်လုပ်နေအုံးမှာပဲ။ ထားပါတော့လေ…. Kumar က ကျနော့်ကိုပြောတယ်။ Subhash Chandra က တောရွာလေးတစ်ရွာကလာတာ ၁၀ တန်းမှာ ကျောင်းထွက်ပြီး အလုပ်လု ပ် ခဲ့တာ ။ အခုတော့လည်း ဘီလျံနာသူဌေးကြီးကိုဖြစ်လို့။
ဘဝမှာတစ်နေရာမှာကျရှုံးတိုင်း တစ်ဘဝလုံးကျရှုံးတယ်လို့ မမြင်နဲ့တဲ့။ ကျနော်လည်းအဲ့လိုမြင်ပါတယ်။ ၁၀ တန်းဆိုတာ ဘဝခရီးရှည်ကြီးမှာ မိုင်တိုင် လမ်းခွဲတစ်ခုမှာ တင်တဲ့မှတ်ကျောက်တစ်ခုပါပဲ။ အဲ့ဒီ မှာ အရှိန်ကောင်းနေ ရင် တာထွက်ကောင်းနေပြီ ဆက်ပြေးပါ။ တာထွက်မကောင်းခဲ့ရင်လည်း ဘဝမှာ တစ်ခုခုအောင်မြင်အောင် ကြိုးစားပါ။ လူတစ်ယောက်ချင်းစီ အတွက် ဘုရားသခင်ကပေးလာ မယ့် အောင်မြင်မှုပုံစံ ဟာ တူချင်မှတူပါမယ်။ ကိုယ်မမြင်ရတဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာ exciting life game ကို ဆက်ဆော့ပါ။ Kumar ကိုဆက်မေးတယ်။“မင်းဘယ် လို IT ပညာရှင်ဖြစ်လာသလဲ ဆက်ပါအုံး။”
၁၀ တန်းကျတဲ့နေ့မှာ စိတ်ဓာတ်ကျပြီး စိတ်ပျော်ရွှင် ရာ တစ်ခုခုတွေ့မလား ဆိုပြီး အင်တာနက်ထဲ မှာ တစ်ချိန်လုံးလွင့်မျောပြီး စိတ်ချမ်းသာရာလိုက်ရှာ သတဲ့။ စိတ်ချမ်းသာရာရှာမတွေ့ချိန် မှာ ကွန်ပျူတာ စခရင် ကိုထိုင်ငေးကြည့်နေမိတယ်။ အဲ့ဒီလိုနဲ့ သူကွန်ပျူတာကိုင်ပြီး စိတ်ချမ်းသာမှုကို ရှာနေမိတာ ကို သတိရသွားတယ်။အဲ့ဒီမှာ ကွန်ပျူတာကို စိတ်ဝင်စားလာပြီး IT နဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိတ်ဝင်စား ကာ လေ့လာသင်ယူ ချင် စိတ်တွေပေါ်လာ တယ်။ အဲ့ဒီကနေ ပရိုဂရမ်ေ ရးတာတွေ IT ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ ကို အခြေခံကစပြီး လေ့လာဖြစ် တယ်။
တစ်နေ့လုံး ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတာကို ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် လေ့လာ သင်ယူရင်း နဲ့ IT Certificate စာမေးပွဲတွေဝင်ဖြေဖြစ် တယ်။ အဲ့ဒီကနေ IT နဲ့ အလုပ်ရတယ်။ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရတယ်။ စင်ကာပူ ကိုလာတယ်။ အင်တာဗျူးမှာ အလုပ်ရှင်လိုချင်တဲ့ ပရောဂျက်တစ်ခုကို မိနစ်ပိုင်းအတွင်းလုပ်ပြနိုင်ခဲ့တယ်။တကယ်ရထားတဲ့ IT Certificate တွေကလည်း ရှိတယ်။ အဲ့ဒီကနေ သူ့ဘာသာသူ IT company လေးထူထောင်တယ်။Kumar က ကျနော့်ကို မေးတယ်။ မင်းမှာ “ကျောင်းကြွေး ရှိသလား?”တဲ့။ဟ… နိုင်ငံခြား မှာ ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ် ရပ်ပြီး ကျောင်းတက် ခဲ့ရတာပဲ ဘဏ်ချေးငွေ Study loan တော့ ရှိခဲ့တာပေါ့လို့။ ဒါတောင် ကျောင်းလခ ရဲ့ ၈၀ ရာနှုန်းကမပေးရလို့။ဟား… ဟား… မင်းနဲ့ငါ အဲ့ဒါကွာတာပဲ။
အဲ့ဒီ သားသမီးအတွက် နိုင်ငံခြားတ က္ကသိုလ်ထားဖို့ ကျောင်းစားရိတ် နဲ့ ပိခဲ့ရတဲ့ မိဘတွေမနည်းဘူး တဲ့။ မင်းတို့လို ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်တက်ခဲ့သူတွေမှာလည်း ကျောင်းကြွေးကို ပြန်ဆပ်ခဲ့ရတာ။ ငါက တက္ကသိုလ်မတက်ခဲ့ရတော့ ကျောင်းကြွေး မရှိဘူးကွတဲ့။ပြီးတော့ ငါက တက္ကသိုလ် တက်ပြီး ဟေးလား ဝါးလား အချိန်မကုန်ပဲ လုပ်ငန်းခွင်ထဲ စောစော ရောက်ခဲ့တယ် ။ ဒါကြောင့် အချိန်တွေမကုန်ခဲ့ဘူးတဲ့။ ဒါကြောင့် ၁၀ တန်းမအောင်ခဲ့တာ ငါ့အတွက် ငွေလည်းမကုန် အချိန်လည်းမကုန်ပဲ ကံကောင်းခဲ့သတဲ့။ ကျနော်က သူပြောတာကို ယဉ်ကျေးစွာပြန်ရေးပြနေတာ။
သူကတော့ ကျနော်နဲ့ နှစ်ယောက်တည်း လွတ်လွတ်လ ပ်လပ်ပြောနေတာ ဆိုတော့ ”ေ_ာက် ကျောင်းကြွေးရော၊ေ_ာက်အချိန်ရောမကုန်ဘူး” လို့ပြောသွားတာ။ဒီနေရာမှာ သူမှန်တယ်လို့ ပြောလို့မရပေမယ့် သူ့အတွက်သူအကောင်းဆုံးဘဝကို ကျရှုံးမှုကတွေကနေ ဖန်တီးယူသွားပြီး သူများတွေထက် အားသာချက်ကို ရယူသွားနိုင်တာ အမှန် ပါ ပဲ။ ကျနော်ပြောလိုတာက ပြီး ခဲ့တာပြီးခဲ့ပြီ။ အခုအောင်တဲ့သူရော မအောင်တဲ့သူရော ဂုဏ်ထူးများသူရော၊ မများသူရောကို တာလွှတ်မှုတစ်ခုပေးလိုက်ပြန်ပါပြီ။
မအောင်တဲ့သူဆိုရင် ကျနော်ကတော့ ၁၀ တန်းအောင်အောင်တော့ပြန်ဖြေ စေချင်ပါတယ်။ ၁၀ တန်းအောင်ပြီးရင် ဘွဲ့ရဖို့ မခက်တော့ပါ။ပြန်မဖြေဘူးဆိုတဲ့သူတွေကို ပြန်ဖြေဖို့ ထပ်တိုက်တွ န်းပါရစေ။ သို့သော် ငါဘာမှား ခဲ့သလဲ ကို ပြန်သုံးသပ်တတ် ဖို့နဲ့ ။ အောင်မြင်အောင်လုပ်ယူနိုင် ဖို့ မိဘအသိုင်းအဝိုင်းက အားပေးစေချင် ပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ထမင်းရှာစားရမယ့်ပညာကို သင်ယူရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ငါဘယ်မှာဝါဿနာပါမှန်းမသိရင်လည်း ရရာပညာနဲ့ အလုပ်ကိုဝင်လုပ်ပါ။ အောက်ခြေအလုပ်မှာ မမျောသွားပါနဲ့ ။ ဘဝင်မမြင့်ပါနဲ့။ မိုတီတွေဖတ်ပြီးကိုယ်ပိုင်အလုပ်ထထောင်ဖို့စိတ်ကူးတွေယဉ်မနေပါနဲ့။ ငယ်တဲ့အချိန်မှာသင်ယူပါ။ အလုပ်ပေါ်မှာစေတနာထားပါ။ တိုးတက်လမ်းကိုရှာပါ။ ၁၀ တန်းဟာ တစ်ဘဝမဟုတ်ဘူးဆိုတာ မောင်တို့မယ်တို့သိကြပါ။Self-learning ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် စိတ်ဝင်စားရာ အသက်မွေးပညာကို အချိန်ဖဲ့ပေး၍ သင်ယူခြင်းသာလျှင် တစ်ဘဝလုံးအတွက်ရိက္ခာဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်ရည်မှန်းထားတဲ့ကျောင်းရခဲ့ရ င်လည်း ဆရာသင်ပေးတာစောင့်မနေ ပါနဲ့လို့။ ထပ်မှာပါမယ်။ ၁၀ တန်းဟာ ဘဝတစ်ခုလုံးမဟုတ်ပါ။
“ဂျက်မားဟာတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲ မှာနှစ်ကြိမ်ကျရှုံးဖူးတာ ကိုမေ မ့ပါနဲ့။” ဒါတောင် မူလတန်းမှာ နှစ်ကြိမ်ကျဖူးတာ နဲ့၊ အလယ်တန်း မှာ သုံးကြိမ်ကျဖူးတာကို ထည့်မပြောသေးဘူး။ တစ်ခုတော့မှာခဲ့မယ်။ ကျရှုံးမှု ကို ဂျက်မားကို လက်ညိုးထိုးပြပြီး ကိုယ့်ကိုယ် ကို ဂုဏ်ယူမနေနဲ့။ကျရှုံးမှုဟာ ဝမ်းနည်းစရာလည်း မဟုတ်သ လို ဂုဏ်ယူစရာလည်း မဟုတ်ဘူး။ “Change” အပြောင်းအလဲ တစ်ခုလုပ်ပြဖို့ သတိပေးချက်တစ်ခုသာဖြစ်တယ်။
“၁၀” တနျး မအောငျ ခဲ့ တဲ့ ညီလေး ညီမလေး မြား ( ဒီပို့ဈ ကို မွငျရငျ ကြျော မသှား ပါ နဲ့ ဖတျဖွဈအောငျ ဖတျပေးပါ)
လှနျခဲ့တဲ့ ၅ နှဈေ လာကျ က အိန်ဒိယနိုငျငံ သား တဈယောကျ နဲ့ အလုပျ ကိစ်စစကားပွောဖွဈခဲ့ ပါတယျ။သူက IT company လေးတဈခုပိုငျတယျ။ ဟိုဟိုဒီဒီအကွောငျးတှပွေောရငျးနဲ့ ဘဝမှာကရြှုံးမှုတှေ အကွောငျးရောကျ သှားတယျ။ ကနြေျာ့အနနေဲ့ ဘဝမှာအောငျမွငျနတေဲ့လူတှအေကွောငျး ကွားရတာအပျကွောငျးထပျနပွေီမို့ စိတျမဝငျစားပါ ။အကွိမျကွိမျမေ အာငျမွငျပွီး မှ အောငျမွငျလာ တဲ့ အကျဒီစငျဘာညာ ဆိုတာလညျး ငယျငယျ ကတညျးက ကွားရတာရိုးနပွေီမို့ ကနြေျာ့အတှကျ မတိုးတော့တဲ့ မိုတီဗေးရှငျးဆေးဖွဈနပေါပွီ။ ကိုယျလကျလှမျးမမီနိုငျတဲ့ KFC သူဌေးတို့ဘာညာထကျစာရငျ ကရြှုံးမှုကနေ ကိုယျလကျလှမျးမီနိုငျလောကျတဲ့ အောငျမွငျမှုတဈခု ကို လကျတှေ့ တညျဆောကျခဲ့သူတှေ ကိုပဲ စိတျဝငျစား ပါတယျ။
ကနြျော နဲ့တှတေဲ့ Kumar က သူ့ဘဝ မှာ ၁၀ တနျးကတြုနျးက စိတျဓာတျ အတျောကဖြူးကွောငျးပွောတော့ မေးမိတယျ ။ အာ့နဲ့ နောကျနှဈပွနျဖွတော အောငျသှားရောလား ဆိုတော့ မအောငျသေးဘူးတဲ့ ။ မငျးဒါဆိုရငျ IT ပညာရှငျ ဘယျလိုဖွဈလာသလဲ? လို့မေးတော့…. ၁၀ တနျး မအောငျတာ နဲ့ဘဝကွီးကတနျ့နရေမှာ လားတဲ့။ကနြေျာ့ကို ပွနျမေး တယျ။ မငျး အိန်ဒိယက လုပျငနျးရှ ငျ သူဌေးကွီး Subhash Chandra ကို သိလားတဲ့။ Zee Television ကစလို့ မီဒီယာ၊ နညျးပညာ၊ ပညာရေး၊ ဆနျကစလို့ စားသောကျ ကုနျလုပျငနျး အငျပါယာကွီး ထူထောငျထား တဲ့ သူဌေးကွီး၊ လှတျတျော အမတျ Subhash Chandra ကို သိတာပေါ့လို့။ သူ့အကွောငျး စာ အုပျ ရှိတယျ။“my journey as the wrong man at the right time” တဲ့။ ဘဝမှာ အခြိနျကိုကျမှာ အမှားသှားလုပျမိရငျး အမှနျဖွဈသှားသူတှမေနညျးဘူး။ ဒါ့ကွောငျ့ အမှားလုပျမိတိုငျး စိတျညဈစရာမဟုတျဘူး။ ပွနျပွငျလို့ရတဲ့ အမှားမှနျသမြှက အမှားလို့မချေါဘူးဗြ။ အေး… နောကျမမှားစနေဲ့။ သငျခနျးစာမယူတတျရငျ အိုပွီးသသှေားတဲ့အထိ အမှား ကို ဆငျ့ကာဆငျ့ကာ ထပျလုပျနအေုံးမှာပဲ။ ထားပါတော့လေ…. Kumar က ကနြေျာ့ကိုပွောတယျ။ Subhash Chandra က တောရှာလေးတဈရှာကလာတာ ၁၀ တနျးမှာ ကြောငျးထှကျပွီး အလုပျလု ပျ ခဲ့တာ ။ အခုတော့လညျး ဘီလြံနာသူဌေးကွီးကိုဖွဈလို့။
ဘဝမှာတဈနရောမှာကရြှုံးတိုငျး တဈဘဝလုံးကရြှုံးတယျလို့ မမွငျနဲ့တဲ့။ ကနြျောလညျးအဲ့လိုမွငျပါတယျ။ ၁၀ တနျးဆိုတာ ဘဝခရီးရှညျကွီးမှာ မိုငျတိုငျ လမျးခှဲတဈခုမှာ တငျတဲ့မှတျကြောကျတဈခုပါပဲ။ အဲ့ဒီ မှာ အရှိနျကောငျးနေ ရငျ တာထှကျကောငျးနပွေီ ဆကျပွေးပါ။ တာထှကျမကောငျးခဲ့ရငျလညျး ဘဝမှာ တဈခုခုအောငျမွငျအောငျ ကွိုးစားပါ။ လူတဈယောကျခငျြးစီ အတှကျ ဘုရားသခငျကပေးလာ မယျ့ အောငျမွငျမှုပုံစံ ဟာ တူခငျြမှတူပါမယျ။ ကိုယျမမွငျရတဲ့ စိတျဝငျစားစရာ exciting life game ကို ဆကျဆော့ပါ။ Kumar ကိုဆကျမေးတယျ။“မငျးဘယျ လို IT ပညာရှငျဖွဈလာသလဲ ဆကျပါအုံး။”
၁၀ တနျးကတြဲ့နမှေ့ာ စိတျဓာတျကပြွီး စိတျပြျောရှငျ ရာ တဈခုခုတှမေ့လား ဆိုပွီး အငျတာနကျထဲ မှာ တဈခြိနျလုံးလှငျ့မြောပွီး စိတျခမျြးသာရာလိုကျရှာ သတဲ့။ စိတျခမျြးသာရာရှာမတှခြေိ့နျ မှာ ကှနျပြူတာ စခရငျ ကိုထိုငျငေးကွညျ့နမေိတယျ။ အဲ့ဒီလိုနဲ့ သူကှနျပြူတာကိုငျပွီး စိတျခမျြးသာမှုကို ရှာနမေိတာ ကို သတိရသှားတယျ။အဲ့ဒီမှာ ကှနျပြူတာကို စိတျဝငျစားလာပွီး IT နဲ့ ပတျသကျပွီး စိတျဝငျစား ကာ လလေ့ာသငျယူ ခငျြ စိတျတှပေျေါလာ တယျ။ အဲ့ဒီကနေ ပရိုဂရမျေ ရးတာတှေ IT ပိုငျးဆိုငျရာတှေ ကို အခွခေံကစပွီး လလေ့ာဖွဈ တယျ။
တဈနလေုံ့း ကိုယျစိတျဝငျစားတာကို ကိုယျ့ဘာသာကိုယျ လလေ့ာ သငျယူရငျး နဲ့ IT Certificate စာမေးပှဲတှဝေငျဖွဖွေဈ တယျ။ အဲ့ဒီကနေ IT နဲ့ အလုပျရတယျ။ လုပျငနျးအတှအေ့ကွုံရတယျ။ စငျကာပူ ကိုလာတယျ။ အငျတာဗြူးမှာ အလုပျရှငျလိုခငျြတဲ့ ပရောဂကျြတဈခုကို မိနဈပိုငျးအတှငျးလုပျပွနိုငျခဲ့တယျ။တကယျရထားတဲ့ IT Certificate တှကေလညျး ရှိတယျ။ အဲ့ဒီကနေ သူ့ဘာသာသူ IT company လေးထူထောငျတယျ။Kumar က ကနြေျာ့ကို မေးတယျ။ မငျးမှာ “ကြောငျးကွှေး ရှိသလား?”တဲ့။ဟ… နိုငျငံခွား မှာ ကိုယျ့ခွထေောကျပျေါကိုယျ ရပျပွီး ကြောငျးတကျ ခဲ့ရတာပဲ ဘဏျခြေးငှေ Study loan တော့ ရှိခဲ့တာပေါ့လို့။ ဒါတောငျ ကြောငျးလခ ရဲ့ ၈၀ ရာနှုနျးကမပေးရလို့။ဟား… ဟား… မငျးနဲ့ငါ အဲ့ဒါကှာတာပဲ။
အဲ့ဒီ သားသမီးအတှကျ နိုငျငံခွားတ က်ကသိုလျထားဖို့ ကြောငျးစားရိတျ နဲ့ ပိခဲ့ရတဲ့ မိဘတှမေနညျးဘူး တဲ့။ မငျးတို့လို ကိုယျ့ဘာသာကိုယျတကျခဲ့သူတှမှောလညျး ကြောငျးကွှေးကို ပွနျဆပျခဲ့ရတာ။ ငါက တက်ကသိုလျမတကျခဲ့ရတော့ ကြောငျးကွှေး မရှိဘူးကှတဲ့။ပွီးတော့ ငါက တက်ကသိုလျ တကျပွီး ဟေးလား ဝါးလား အခြိနျမကုနျပဲ လုပျငနျးခှငျထဲ စောစော ရောကျခဲ့တယျ ။ ဒါကွောငျ့ အခြိနျတှမေကုနျခဲ့ဘူးတဲ့။ ဒါကွောငျ့ ၁၀ တနျးမအောငျခဲ့တာ ငါ့အတှကျ ငှလေညျးမကုနျ အခြိနျလညျးမကုနျပဲ ကံကောငျးခဲ့သတဲ့။ ကနြျောက သူပွောတာကို ယဉျကြေးစှာပွနျရေးပွနတော။
သူကတော့ ကနြျောနဲ့ နှဈယောကျတညျး လှတျလှတျလ ပျလပျပွောနတော ဆိုတော့ ”ေ_ာကျ ကြောငျးကွှေးရော၊ေ_ာကျအခြိနျရောမကုနျဘူး” လို့ပွောသှားတာ။ဒီနရောမှာ သူမှနျတယျလို့ ပွောလို့မရပမေယျ့ သူ့အတှကျသူအကောငျးဆုံးဘဝကို ကရြှုံးမှုကတှကေနေ ဖနျတီးယူသှားပွီး သူမြားတှထေကျ အားသာခကျြကို ရယူသှားနိုငျတာ အမှနျ ပါ ပဲ။ ကနြျောပွောလိုတာက ပွီး ခဲ့တာပွီးခဲ့ပွီ။ အခုအောငျတဲ့သူရော မအောငျတဲ့သူရော ဂုဏျထူးမြားသူရော၊ မမြားသူရောကို တာလှတျမှုတဈခုပေးလိုကျပွနျပါပွီ။
မအောငျတဲ့သူဆိုရငျ ကနြျောကတော့ ၁၀ တနျးအောငျအောငျတော့ပွနျဖွေ စခေငျြပါတယျ။ ၁၀ တနျးအောငျပွီးရငျ ဘှဲ့ရဖို့ မခကျတော့ပါ။ပွနျမဖွဘေူးဆိုတဲ့သူတှကေို ပွနျဖွဖေို့ ထပျတိုကျတှ နျးပါရစေ။ သို့သျော ငါဘာမှား ခဲ့သလဲ ကို ပွနျသုံးသပျတတျ ဖို့နဲ့ ။ အောငျမွငျအောငျလုပျယူနိုငျ ဖို့ မိဘအသိုငျးအဝိုငျးက အားပေးစခေငျြ ပါတယျ။ဘာပဲဖွဈဖွဈ ထမငျးရှာစားရမယျ့ပညာကို သငျယူရမှာ ဖွဈပါတယျ။ ငါဘယျမှာဝါဿနာပါမှနျးမသိရငျလညျး ရရာပညာနဲ့ အလုပျကိုဝငျလုပျပါ။ အောကျခွအေလုပျမှာ မမြောသှားပါနဲ့ ။ ဘဝငျမမွငျ့ပါနဲ့။ မိုတီတှဖေတျပွီးကိုယျပိုငျအလုပျထထောငျဖို့စိတျကူးတှယေဉျမနပေါနဲ့။ ငယျတဲ့အခြိနျမှာသငျယူပါ။ အလုပျပျေါမှာစတေနာထားပါ။ တိုးတကျလမျးကိုရှာပါ။ ၁၀ တနျးဟာ တဈဘဝမဟုတျဘူးဆိုတာ မောငျတို့မယျတို့သိကွပါ။Self-learning ကိုယျ့ဘာသာကိုယျ စိတျဝငျစားရာ အသကျမှေးပညာကို အခြိနျဖဲ့ပေး၍ သငျယူခွငျးသာလြှငျ တဈဘဝလုံးအတှကျရိက်ခာဖွဈလာပါလိမျ့မယျ။ ကိုယျရညျမှနျးထားတဲ့ကြောငျးရခဲ့ရ ငျလညျး ဆရာသငျပေးတာစောငျ့မနေ ပါနဲ့လို့။ ထပျမှာပါမယျ။ ၁၀ တနျးဟာ ဘဝတဈခုလုံးမဟုတျပါ။
“ဂကျြမားဟာတက်ကသိုလျဝငျခှငျ့စာမေးပှဲ မှာနှဈကွိမျကရြှုံးဖူးတာ ကိုမေ မ့ပါနဲ့။” ဒါတောငျ မူလတနျးမှာ နှဈကွိမျကဖြူးတာ နဲ့၊ အလယျတနျး မှာ သုံးကွိမျကဖြူးတာကို ထညျ့မပွောသေးဘူး။ တဈခုတော့မှာခဲ့မယျ။ ကရြှုံးမှု ကို ဂကျြမားကို လကျညိုးထိုးပွပွီး ကိုယျ့ကိုယျ ကို ဂုဏျယူမနနေဲ့။ကရြှုံးမှုဟာ ဝမျးနညျးစရာလညျး မဟုတျသ လို ဂုဏျယူစရာလညျး မဟုတျဘူး။ “Change” အပွောငျးအလဲ တဈခုလုပျပွဖို့ သတိပေးခကျြတဈခုသာဖွဈတယျ။
(၁၀)တန်းဖြေ ထားတဲ့ အပျိုဖော်ဝင် ခါစ (၁၆)နှစ်သမီးလေး အခန်း ထဲကို အဖေ တစ်ယောက် ဝင်ကြည့် လိုက်တဲ့အခါ…
ကိုဗဈ ကွောကျတဲ့ အရာ( ၇ )မြိုး (အမြားသိအောငျ ရှယျထားပေးပါအုံး …)
ယောကျာင်္း ပီသသူက ဒီစာလေး ကို လက်ခံသလို မိန်းမပီသ သူကလည်း ကိုယ့်ဘဝ ကိုကိုယ် တန်ဖိုး ထားစေချင်တယ်